I-Samsung Galaxy Note 9 inokuba nomfundi ofunda ngeminwe phantsi kwesikrini | Iindaba zeGajethi
Ayikho imfihlo leyo Iflegi elandelayo yakwaSamsung iya kuba lilungu elitsha losapho lweNqaku. Entsha phablet ngefomathi enkulu kwaye yazisa into yefom kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwaye njalo ukwamkelwa eluntwini ukuba iiterminal ezinkulu zefomathi zi okufuneka ubenazo Iinkampani eziphambili kwiikhathalogu zazo.
Ukuba yonke into isebenza njengesiqhelo, iSamsung izakubamba umsitho omtsha kwihlobo elidlulileyo kwaye izakugxila ngoSeptemba, inyanga ebibanjelwe eBerlin (eJamani), omnye umsitho wetekhnoloji obaluleke kakhulu kwicandelo: IFA. Kwisakhelo salo mboniso mhle, amaKorea athatha ithuba lokukhupha ikrele lakhe lokuqala elitsha ukuze afumane isabelo esikhulu kulonyaka wokugqibela. Lo 2018 kufuneka ubonakale kwindawo I-Samsung Galaxy Note 9.
Yonke into iphakamise ukuba ezinye zeemodeli zokugqibela eziphezulu kweli candelo ziya kubandakanya itekhnoloji entsha ngokubhekisele kwabafundi beminwe. U-Apple, umzekelo, ukhuphe i-tangent kwaye wasusa i-ID ye-Touch ngesibetho kwaye waziqhayisa ngetekhnoloji entsha: I-ID yobuso. Nangona kunjalo, Isamsung ikhethe kwakhona ukudibanisa umfundi wayo weminwe ngasemva, nangona inendawo entsha.
Ngoku, ukuba kukho into ebambe umdla woluntu, ziimodeli zaseAsia eziye zavela kwimarike kunye nomfundi weminwe phantsi kwesikrini: umfundi okhuselweyo ongathathi sithuba ngaphambili, eshiya ukuqaqamba okupheleleyo kwizikrini . Y Eli nqaku linokufakwa kwi-Samsung Galaxy Note 9, ngokwemithombo ebikwazile ukubonisana okoko kwapapashwa Korea Herald. Ngapha koko, kwa le mpapasho inye ibhekisa kwinto yokuba i-phablet entsha yase-Asiya ilixesha lokuba ivele kunye nale nto kwaye ukuhanjiswa kwayo kuya kufika ekupheleni kuka-Agasti-i-IFA iya kuqala nge-31 ka-Agasti. Siza kubona ukuba iphela njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy Note 9 inokuba nomfundi ofunda ngeminwe phantsi kwescreen